novembre 2019 – FIRAISAN'NY SENDIKAN'NY MPIASA ETO MADAGASIKARA
Betsaka ny mpiasa no misalasala amin’ny fidirana sendika sy tsy mahafantatra tsara ny atao hoe SENDIKA. Misy mihevitra fa mpisolo vava ny mpiasa eny amin’ny tribonaly izy. Na koa mihevitra azy ho ray aman-dreny itarainana sy idodododoana fotsiny ihany koa … Lire la suite­­
Toa izao ny 1 – Momba ny faharetan’ny asa : Ny atao hoe faharetan’ny asa dia ny Fe-potoana tena iasana : tsy tafiditra ny fotoana lany amin’ny fisoloana akanjo sy ny fisakafoana a) Ny faharetan’ny ora iasana ara-dalàna isam-bolana dia … Lire la suite­­
Ireto avy ny antony mahatapaka ny fifanarahana momba ny asa : Ny fahafatesan’ny mpiasa, Fandroahana avy amin’ny mpampiasa, Fametraham-pialana avy amin’ny mpiasa, Fifanarahana eo amin’ny andaniny sy ny ankilany, Tranga tsy azo anoharana (cas de force majeure) izay apetraka amin’ny … Lire la suite­­
Ny fihantonan’ny fifanekena momba ny asa.
Mandritry ny fanatanterahana ny fifanekena momba ny asa dia mety hitranga ny fihantonan’izany. Koa ireto ny tranga iraikambin’ny folo (11) voalazan’ny Lalana mihefy ny asa. Ireto ny antony mampihantona ny fifanekena, sy ireo antony mahatapaka azy: Fotoana hiantsoana ny mpampiasa … Lire la suite­­
Ny fifanekena momba ny asa
Zava-dehibe tokoa ny fifandraisana ao amin’ny asa ka mila fantarina amin’ny an-tsipiriany mba hisorohana ny olana, ka ny hanombohana azy dia ny FIFANEKENA MOMBA NY ASA. 1. Ireto avy ny fitsipi-pifehezan’ny fifanekena momba ny asa izay noraiketan’ny lalana mifehy ny … Lire la suite­­